Ndwendwela paphamama community - I-Airbnb
Ndwendwela paphamama community
Iflethi ekwifama endala enegadi eluhlaza nenonxweme oluhle olukude kangangemizuzu eyi-20. Ikwindawo ethandekayo nendalo yase-Alentejo, kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukusuka kwisixeko esimhlophe esiyimbali sase-Alcacer do Sal.
Siyintsapho encinci egcwele abantu nezilwanyana. Ngaphezu koko sinabatyeleli abaninzi ehlotyeni, ngoko indawo yethu isoloko igcwele. Qho ngeCawa ngokuhlwa senza i-pizza-events kwaye wamkelekile ukuba ujoyine. Siza kudlala umculo kude kube ngo-22:00 kufutshane neflethi okanye indlu ekwicomplex.
Iflethi inamagumbi okulala amabini amancinci, aqaqambileyo, ikhitshi elivulekileyo elinendawo yokuhlala negumbi lokuhlambela.
Kukho ityeya phambi kweflethi okanye indlu ekwicomplex enendawo yokuxhoma ifenitshala etofotofo.
ngaphandle koko sinendawo yasekuhlaleni eneesofa netafile yokuqubha elungele ukuzonwabisa ngokuhlwa.
Ifama ime kufutshane neendawo zerayisi eziluhlaza, ngoko ke ii-mosquitos zinokwenzeka. Iflethi inokhuseleko lwe-mosquitos kwiifestile, ngoko unokulala lula xa iifestile zivuliwe.
Inxalenye enomtsalane yefama yethu kukuba akukho bamelwane, ngoko uziva usemaphandleni. Kodwa le dolophu ikumgama wokuba ungahamba ngeenyawo, okanye wamkelekile ukuba ubize ibhayisekile.
Indawo yaseAlentejo indala kakhulu, kwaye ineendawo ezininzi eziphawulekayo kunye nendalo egciniweyo.
Sinoqhagamshelwano apha nabantu abathandekayo, abanokukukhupha ukuloba, ukusefa okanye ukukhwela ihashe.
Siliqela labantu basekuhlaleni nabacinga kakhulu, kwaye sihlala nje kufutshane. Ngoko ukuba udinga abantu osebenza nabo, icebiso elihle okanye ufuna nje ukuboleka ikomityi yeswekile, sisoloko sifumaneka :). Ngaphezu koko, zininzi izinto onokuzenza ukuze sibe nabantu basekuhlaleni njengoko sibuka iindwendwe kwiikharaveni kwaye sinendawo yasekuhlaleni apho unokudibana khona nesiselo okanye ipitsa.
Siliqela labantu basekuhlaleni nabacinga kakhulu, kwaye sihlala nje kufutshane. Ngoko ukuba udinga abantu osebenza nabo, icebiso elihle okanye ufuna nje ukuboleka ikomityi yeswekil…
Inombolo yomthetho: 96370/AL